Yintoni i-Humpty Dumpty Word okanye i-Stipative?
Isicaciso sincazelo echaza intsingiselo kwigama, ngamanye amaxesha ngaphandle kokuqwalasela ukusebenzisa okuqhelekileyo.
Ixesha eliqhelekileyo inkcazo yexesha eliqhelekileyo isetyenziselwa ukusetyenziswa kwimeko engqondweni yokubhekiselele kwingcaciso ebonakala ilahlekisa ngamabomu.
Incazelo ecacileyo, efana neyinto eyenzeka kwisichazamazwi (' idilesi '), luhlobo lweengxelo ezisetyenziswayo kulwimi . Isiqulatho esicacisayo ('sichaza') olo lwimi luya kusetyenziswa ngendlela enikeziweyo. "U
(UMichael Ghiselin, iMetaphysics kunye neMvelaphi yeeNdawo .
I-SUNY Press, 1997)
"Amagama ngeelwimi zixhobo zonxibelelwano kulwimi, kwaye inkcazo ecacileyo iyakuncedo kuphela xa ibeka imilinganiselo yokusetyenziswa engqiqweni kunye nokuqondakalayo eyenziwa ngokufanelekileyo. kwintsingiselo yalo entsha iya kuba yinxalenye yolwimi loluntu, kwaye luvulelekile utshintsho kunye nokuhlukahluka kokusetyenziswa njengamanye amagama. "
(UTrudy Govier, Isifundo sokuSebenzisana sokuPhikisana , umhla wama-7 u-Wadsworth, 2010)
Ukusetyenziswa kakubi kweengcaciso ezicwangcisiweyo
" Iingcaciso ezikhohlisayo zisetyenziswa kakubi kwizimpikiswano zomlomo xa umntu esebenzisa ngokugqithiseleyo igama ngendlela ekhethekileyo aze afune ukuba wonke umntu usebenzisa igama ngendlela efanayo. Ngaphansi kwezi meko umntu kuthiwa usebenzisa igama elithi 'ngokucacileyo. ' Kwiimeko ezinjalo ukucinga ukuba omnye umntu usebenzisa igama ngendlela efanayo akusoloko echanekileyo. "
Hurley, A Concise Isingeniso kwi-Logic , ngo-11. Wadsworth, 2012)
Iinkcazo ezixubileyo zeHumpty Dumpty
"Andiyazi ukuba uthetha ntoni ngozuko," u-Alice uthe.
Humpty Dumpty bamomotheka ngokukrakra. "Kakade awuyi-de ndikuxelele. Ndithetha ukuba 'kukho ingxabano enokubhenqa!' "
"Kodwa uzuko" aluthethi 'ingxabano enobungqina,' "u-Alice wamchasa.
"Xa ndisebenzisa igama," u-Humpty Dumpty uthe, ngokukodwa ityala elihlekisayo, "lithetha oko ndikukhethayo kuthetha ukuthini-kungekhona nangaphezulu."
U-Alice uthi, "Umbuzo kukuba, nokuba ungenza amagama athetha izinto ezininzi ezahlukeneyo."
"Umbuzo uwukuthi," uthe u-Humpty Dumpty, "oza kuba yinkosi-konke oko."
UAlice wayemangaliswe kakhulu ukuba athethe nantoni na; ngoko emva komzuzu u-Humpty Dumpty waqala kwakhona. "Unomsindo, ezinye zazo-ikakhulukazi izenzi, ziyizivakalisi ezizikhukhumezayo ongakwenza nantoni na, kodwa kungekhona izenzi-nangona kunjalo, ndinokulawula yonke into yabo! Ukungaphumeleli! Yiloo nto ndithethayo! "
Ngicela uxelele, nceda, "utshilo uAlice," oko kuthetha ntoni? "
"Ngoku uthetha njengomntwana onengqiqo," uthe u-Humpty Dumpty, ekhangeleke kakhulu. "Ndithetha 'ukungenakwenzeka' ukuba sanele ngokwaloo mbandela, kwaye kuya kuba njalo ukuba uthetha ukuba uthetha ukuthini ukwenza okulandelayo, njengoko ndicinga ukuba awuthetha ukuyeka apha onke amanye bakho ebomini. "
"Kunzima ukwenza igama elinye lithetha," u-Alice wathi ngezwi elicingayo.
"Xa ndiyenza igama ukwenza umsebenzi omningi onjalo," watsho u-Humpty Dumpty, "ndihlala ndihlawula."
(Lewis Carroll, ngokusebenzisa i-Looking-Glass , ngo-1871)
" Iingcaciso ezichazayo ezichazayo okanye iinguqulelo zithiwa 'iingcaciso ezikholisayo.' Zenzelwe ukunyanzelisa nokuphatha abantu, ukucacisa intsingiselo nokukhuthaza ukuthetha.
Ngamanye amaxesha iinkcazo zempembelelo zidibeneyo kwiintengiso, iikhankaso zezopolitiko, nakwiingxoxo malunga nokuziphatha kunye nezopolitiko. Ngokomzekelo inkcazo, 'Umama onomdla ngumntu osebenzisa i-softness brand', 'uyakholisa ngoba ithetha ngokungekho sikweni isetyenzisiwe sesibini. Igama elithi 'umama onakekelayo' libaluleke ngaphezu koko! "
(UJon Stratton, UCinga oluCacisayo labaFundi beeKholeji . URowman & Littlefield, 1999)
Icandelo eliLungayo leNgcaciso
UNancy: Ungathanda ukuchaza intsingiselo yothando?
I-Fielding Mellish: Yintoni wena. . . ichaze. . . uthando! Ndiyakuthanda! Ndifuna ngandlela-thile yokubaluleka kwakho konke kunye nokunye okunye, kwaye ngombono wobukho, kunye nokuhlala kunye, ukuza nokuya egumbini ezineziqhamo ezintle, nothando lwento yendalo ngendlela akafuni okanye abe nomona ngento into umntu ayenayo.
UNancy: Ingaba unayo igum?
(ULouise Lasser noWowody Allen eBhanana , ngo-1971)
Eyaziwayo Njengegama elithi Humpty-Dumpty, incazelo yezomthetho
Uluphi uhlobo lwesiGrike seGramatic?
Ingxelo yokuvuselelwa kweNkcazo
Ukufundisa Abafundi beSwimmers
Indlela Yokunyuka Kwi-Wakeboard
I-Turtle Printable e-Free Sea
"I-Bully Plays": I-8 yokuqala ibonisa ukuqokelela
UGeorge Balanchine weNutcracker
Iimpawu zoMbonakalo zaseNtaliyane
Ukubhalisa kwi-Draft: It is Still the Law
Ukufunda Isifundo - Ukusebenzisa iNgxenye zeNtetho
Study Unit Unit - Virginia
Ukufundisa izakhono ezisebenzayo kubafundi abakhubazekileyo
I-Sunflowers - iMbali yaseMelika yeMbali
I-American Liberty Elm
Ngaba Ndifanele Ndilahle iTeklasi?
Yintoni Umqulu kwiSayensi?
Ukudlala njani i-Alternate Shot
UCerridwen: Umgcini weCauldron
U Allah (uThixo) e-Islam